07/12/12 ~ Myanmar Forward
ဟီလာရီကလင်တန်သည် အာဆီယံဖိုရမ်သို့ တက်ရောက်မည်
Posted by drmyochit Thursday, July 12, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်သည် (၁၉)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ ဖို ရမ်နှင့် ဆက်စပ်ဆွေးနွေးပွဲများသို့တက်ရောက်ရန် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘောဒီး ယား နိုင်ငံ မြို့တော်ဖနွမ်းပင်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖနွမ်းပင်ရှိ အမေရိကန်သံရုံးမှ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့ တွင် သတင်းတစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ကလင်တန်သည် ဖနွမ်းပင်ရှိ အာဆီယံတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် မည့်အပြင် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် Siem Reap ပြည်နယ် တွင်ပြုလုပ်မည့် အာဆီယံ-အမေရိကန်စီးပွားရေးဖိုရမ်တွင် ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းဖိုရမ်တွင် ကမ္ဘောဒီး ယားဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်က သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ရင်လပ်ရှင်နာဝပ် ထရာလည်း တက်ရောက်မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ဖနွမ်းပင်မှ ၃၁၅ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးသည့် အနောက်မြောက်ဘက်ဒေသသည် ကမ္ဘောဒီးယား၏အကြီးဆုံးသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ဖြစ်သည့် အန်ကော ၀ပ် ဘုရားကျောင်းတည်ရှိပြီး နိုင်ငံခြားဧည့်သည် အများဆုံး လာရောက်ရာဒေသဖြစ်ပါသည်။
Posted by drmyochit Thursday, July 12, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်များကို အဆင့်မြှင့်၍ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(B.E) သင် တန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ၌ စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၅၀ နှင့်အထက် ရရှိထားေ သာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို စိစစ်ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် သို့ လျှောက်ထားနို င်ပြီး မြန် မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းမှ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် သို့ ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက် ထားနိုင် မည်ဖြစ်ကာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုလျှင် ကျောင်းသား ၂၅၀ စီ စိစစ်ရွေးချယ် ခေါ် ယူသွားမည်ြ ဖ စ်ကြောင်းသိ ရသည်။
စပိန်ဘဏ်သို့ ယူရိုငွေ ၁၀၀ ဘီလီယံထောက်ပံ့ပေးရန်သဘောတူညီခဲ့ခြင်း
Posted by drmyochit Thursday, July 12, 2012, under | No comments
စပိန်နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးလိုငွေပြမှုလျော့ကျစေရေးအတွက် ချေးငွေကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ တစ်နှစ် ပိုမို ခွင့်ပြုရန်နှင့် စပိန်နိုင်ငံ၏ အကျပ်အတည်းဖြစ်ပေါ်နေသောဘဏ်များကို ကူညီရန်အတွက် ယခုလကုန် တွင် ယူရို ၃၀ ဘီလီယံ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၇ ဘီလီယံ)ခွင့်ပြုရန် ဥရောပဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးများက သဘော တူညီခဲ့ကြပါသည်။ ယူရိုငွေကြေးအသုံးပြုသော ၁၇ နိုင်ငံသည် ဇူလိုင်လလယ်၌ ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် စပိန်နိုင်ငံ နှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာပါ နားလည်မှု သဘောတူစာချုပ်မူကြမ်းကို ၉ နာ ရီကျော်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ပြီး နောက် သဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်း ယူရိုဇုန်အကြီးအကဲ Jean- Claude Juncker က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယူရို ၁၀၀ ဘီလီယံအထိရှိသည့် ကယ်ဆယ်ရေးသဘောတူညီချက်အရ ယူရို ၃၀ ဘီလီယံကို ဇူလိုင်လကုန်တွင် အကျပ်အတည်းဖြစ်နေသည့် စပိန်ဘဏ်များသို့ ပထမ အသုတ် အဖြစ် ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးကြောင်း၊ ၎င်း ထောက်ပံ့ ငွေယူရို ၁၀၀ ဘီလီယံကို ၁၅ နှစ် အထိ နောက် ဆုံးထား၍ ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါ သည်။ EU မှ သတ်မှတ်ထားသည့် တစ်နှစ်အ တွင်း ပြည်သူ့လိုငွေပြမှုမှာ GDP ၏ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသို့လျှော့ချမှုအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်သို့ တိုးမြှင့်သတ် မှတ်ပေးရန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးမှ သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံ၏ budget အခြေအနေနှင့် ပိုမိုဆိုးရွား လာသည့်စီးပွားရေးအခြေအနေတို့အပေါ်မူတည်၍ သက်တမ်းတိုးပေးရခြင်းဖြစ်ပြီး EUမှ သတ် မှတ် ပေးထားသည့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေအတွင်း နိုင်ငံ၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကို အကောင်အ ထည် ဖော်ဆောင်ရွက် သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စပိန်နိုင်ငံအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း လိုငွေ ပြမှုအား ယခုနှစ် တွင် GDP ၏ ၆.၃ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် ၄.၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၄ခုနှစ် တွင် ၂.၈ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း ရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သဘောတူညီချက် တွင် သတ်မှတ်ထားသောဘဏ်များအတွက် တိကျသောစည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ပေးရမည် ဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ကဏ္ဍအားလုံးတွင်လည်း စနစ်တကျကြီးကြပ်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ဂျာမနီတို့သည်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှု ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၁၂ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်မည်ဟု ပြောကြား
အခြေခံအဆောက်အဦ များတည်ဆောက်မှုသည် မိမိနိုင်ငံအတွက် များစွာအကျိုး ရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းလုပ် ငန်း များအတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားရန် ကမ်းလှမ်းမှုများဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ် မာကဲက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ ပညာရေးကဏ္ဍနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ အပြင် အခြား ကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတ မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွက် ဂျာမနီမှ Leopard တင့်ကားအစီး ၁၀၀ ၀ယ်ယူခဲ့ ပြီး ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့မတိုင်မီ အင်ဒိုနီးရှားသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသည် ဂျာမနီ၏ ဒဿမမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၈.၁ သန်းရှိခဲ့ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ဂျာမနီနိုင်ငံမှ အဓိကတင်သွင်းသည့်ကုန်ပစ္စည်းများမှာ စက်ပစ်္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ် ပစ္စည်း များဖြစ် ပြီး ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသည့် ပစ္စည်းများမှာ လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ သတ္တူ များ၊ မော်တော် ယာဉ်များနှင့် ဆေးဝါးပစ္စည်း များဖြစ်ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားမှ ဂျာမနီသို့ အဓိက တင်ပို့သည့် ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီနှင့် အဆီများ၊ စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များ၊ လျှပ်စစ် ပစ္စည်း အစိတ် အပိုင်းများ၊ အထည်အလိပ်များ၊ ဖိနပ်နှင့် သတ္တူရိုင်းများဖြစ်ပါသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွင် ဆန္ဒပြမှုပြင်းထန်နေစဉ် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးက ဆော်ဒီအာရေဗျဘုရင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ရီယာ့ဒ်မြို့၌ အစိုးရ ဆန့်ကျင်သူများအား ပြင်းထန်စွာနှိမ်နင်းနေချိန်၌ အမေရိကန် ဗဟိုထောက် လှမ်း ရေးေ အ ဂျင်စီ (CIA) ညွှန်မှူး ဒေးဗစ်ပက်ထရပ်စ်သည် ဖျားနာနေသည့် ဆော်ဒီအာရေဗျဘုရင် အဗ်္ဗဒူ လာနှင့် ဂျက်ဒါ့ရ်ှမြို့၌တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း အာရပ်သတင်းများက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် မည်သည့် အကြောင်းအရာများဆွေးနွေးခဲ့သည်ကို သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ရှီးယွိုက်ဘာ သာရေးခေါင်းဆောင် Sheikh Nemr al-Nemr အား ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရေနံကြွယ်ဝသည့် ဆော်ဒီအာရေဗျ အရှေ့ ဘက်စီရင်စုတွင် တင်းမာမှုမြင့်မားလျက်ရှိကာ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့က ဆော်ဒီလှုပ်ရှားရေးဝါဒီများသည် ၎င်းစီရင်စုအနှံ့ အစိုးရအားဆန့် ကျင်ဆန်္ဒပြရန်အတွက် ခေါ်ယူလျက်ရှိပါသည်။ မကြာသေးမီက ရီးယာ့ဒ်၌ ဆန္ဒ ပြမှုနှိမ်နင်းရာ တွင် သေဆုံးခဲ့မှုများအား ရှုတ်ချရန်အတွက် Qatif ? Awamiyah? Tarut ?Safwa နှင့် Sihat မြို့များတွင် ဆန္ဒပြမှုများပြုလုပ်ရန် လှုပ်ရှားပြောင်းလဲရေးဝါဒီများက လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါသည်။ ဘာရိန်းလှုပ် ရှား ရေးဝါဒီ များက ဘာရိန်းနိုင်ငံ Sar မြို့နှင့် Daih မြို့များတွင် ဆော်ဒီဆန့်ကျင်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှုပြုလုပ် သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် al-Nemr အား ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဇူလိုင်လ ၈ ရက် နေ့တွင် Qatif မြို့၌ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုပြုလုပ်ရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့များ၏ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုကြောင့် အနည်းဆုံး ၃ ဦးသေဆုံးပြီး အများအပြားဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအစောပိုင်းရက်တွင်လည်း Awamiyah မြို့၌ al-Nemr စီးလာသည့်ကားအား အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှ ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် al-Nemr မှာ ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီး မည်သည့်နေရာတွင် ချုပ်ထားကြောင်း၊ မည်သို့အခြေအနေရှိကြောင်းကိုမူ မသိရှိရသေးပေ။ ၂၀၁၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အရှေ့ ဘက်စီရင်စု၌ အစိုးရအား ဆန့်ကျင်ဆန်္ဒပြကြရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ၅ ဦးသေဆုံးပြီး အများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ချိန်မှစ၍ နောက်ပိုင်းတွင် ဆော်ဒီဘုရင်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်ဆန်္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပွား လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီအား နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြု
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီ အား နိုင် ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ကြေညာချက်အမှတ် (၃၄/၂၀၁၂) ကို၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓိရာဇ် လမ်းအမှတ် (၁၈၁)တွင် ပါတီရုံးချုပ် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီအား ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုဒ်မ ၉ နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြု လိုက်ကြောင်း ကြေ ညာအပ်ပါသည်။ မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီ၏ မှတ်ပုံတင်အမှတ်မှာ (၅၈) ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်နေ့ ထုတ် မြဝတီ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဂျပန်ရေတပ်သည် ဆိုမာလီကမ်းရိုးတန်း၌ ပင်လယ်ဓားပြကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း
ဆိုမာလီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင် ပင်လယ်ဓားပြနှိမ်နင်းရေးနှင့် သတင်းရရှိရေးအတွက် ဂျပန် တပ်ဖွဲ့ (SDF) သည် ဖျက်သင်္ဘောများ၊ ကင်းလှည့်လေယာဉ်များဖြင့် နိုင်ငံပေါင်းစုံ၏တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် အခြား နိုင်ငံများနှင့်အတူ ၎င်းင်းဒေသတွင်ကင်းလှည့်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းဌာနများသို့ဖွင့်ပြောခဲ့ပါသည်။ ဧဒင် ပင်လယ်ကွေ့တွင် လေယာဉ် ၃ စီးကင်းလှည့်လျက်ရှိပြီး ကုန်တင်သင်္ဘော ၃ စီးအား ဂျပန် ဖျက်သင်္ဘော ၂ စီး မှ ပင်လယ်ကွေ့ ဖြတ်ကျော်သည်အထိ လိုက်ပါစောင့်ကြပ် လျက်ရှိသည် ကို မြ င်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့ တွင် NHK သတင်းထောက်မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပင်လယ် ဓားပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များတွင် ဂျပန်၊ တရုတ်နှင့် အိနိ်္ဒယတပ်ဖွဲ့များသည် အလှည့် ကျကင်း လှည့်လျက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းင်းနိုင်ငံများသည် ပိုင်နက် နယ်မြေအငြင်းပွားမှုများကြောင့် ၎င်းတို့အကြား ဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်သော်လည်း ပင်လယ်ဓားပြ ကာကွယ်ရေး Mission တွင် အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ မိမိတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့် တရုတ်၊ အိနိ်္ဒယ၊ အမေရိကန်ဟူ၍မခွဲခြားဘဲ Mission အတွင်း လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက် သွားကြမည် သာဖြစ်ကြောင်း ဂျပန်ရေတပ်အုပ်စု တပ်မှူးဖြစ်သူ Hirokazu Yamazaki မှပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ကျွဲ၊ နွားမွေးမြူရေးတွင် သြစတြေးလျမှဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမည်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ကျွဲ၊ နွားတိရစ်္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဟု ကတိပေးပြောကြားပြီးနောက် အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရသည် ၎င်းနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ဒေသ ၄ ခုတွင် ကျွဲ၊ နွားမွေးမြူရေး ခြံကြီးများ ကို ပြင်ဆင်လျက် ရှိကြောင်း ဒေသသ တင်းမီဒီယာများက ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့ တွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဒေသ ၄ ခုမှာ အနောက် နူဆာ တန်ဂရာရှိ ဆုမ်ဘာဒေသ၊ အရှေ့ နူဆာတန်ဂရာရှိ ၀င်ဂါပူဒေသ၊ အနောက်ပါပူဝါဒေသနှင့် ပါပူ ၀ါဒေသတို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းဒေသများမှာ တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေး၊ အထူးသဖြင့် ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်းများေ မွးမြူရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မွေးမြူရေးခြံအတွက် ဟက်တာ ၁၀၀,၀၀၀ ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပထမဦးစွာဝင်ဂါပူနှင့် ပါပူဝါ ဒေသတို့တွင် ယခုနှစ်အတွင်း ဟက်တာ ၁၀၀,၀၀၀ အား စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား စီးပွားရေး ဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးဝန်ကြီးက ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သြစတြေး လျနိုင်ငံမှရရှိမည့်ရန်ပုံငွေများအား မွေးမြူရေးခြံအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ဦးစားပေး အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာ အင်ဒိုနီးရှား ကျွဲ၊ နွားမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်း အတာ အတွက် တိတိကျကျ အဖြေမရရှိသေးကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရအနေဖြင့် ၎င်းင်းဒေသများ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို အထောက် အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ကျွဲ၊ နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် ဘရာဇီးရင်းနှီြး မှုပ်နှံသူများအား တိုက်ရိုက် လာရောက် လုပ်ကိုင်ရန် စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိကြောင်း ၀န်ကြီးမှ ပြော ကြားခဲ့ပါသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွင် ဆန္ဒပြမှုပြင်းထန်နေစဉ် CIA ည...
ဂျပန်ရေတပ်သည် ဆိုမာလီကမ်းရိုးတန်း၌ ပင်လယ်ဓားပြကာကွ...
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ကျွဲ၊ နွားမွေးမြူရေးတွင် သြစေ...
ရခိုင်တွင် အကြမ်းဖက်ခံရသူများ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လု...
ဗိတိန်ကုန်သွယ်ရေးရုံး ရန်ကုန်မှာ ဖွင့်လှစ်